Umshini wokuhlanza i-China Grain, i-Gravity Separator, Umkhiqizi Womshini Womshini kanye Nomphakeli
Uhlobo lweDrum Pre-Cleaner
Isicoci seMbewu & iGrader
Ukuhlanza Imbewu Emihle
Umshini weBean Polishing
Isihlukanisi sohlobo lweBelt
Umshini Wokuphatha Imbewu
Isistimu Yokulinganisa Isikhwama
Ukuhlanza Imbewu & Umshini Wokucubungula
Ulayini Wokucubungula Imbewu
Ukuhlanza Imbewu / okusanhlamvu
Izinto Zokusebenza Zelebhu
SHIJIAZHUANG SYNMEC INTERNATIONAL TRADING LIMITED [Hebei,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer , Trade Company Amakethe Omkhulu: Worldwide Ngaphandle:91% - 100% Izikweletu:ISO9001, CE, Test Report Incazelo:Umkhiqizi / umhlinzeki we-Umshini wokuhlanza okusanhlamvu, anikela nge-Isihlukanisi seGravity,Umshini Wonakalisi, njll.
Isihlukanisi seGravity 
Uhlobo lwensiza yohlobo lwomoya ohlukanisayo
Uhlobo Lomoya Olugobekayo Lokwehlukana Komoya
Umshini Wonakalisi 
Ukuqhuma kohlobo Lomoya Okushaya amanzi
Isakhi Sohlobo Lomoya
Isihlukanisi se-Magnetic 
I-5XCX Series Magnetic Separator
Isihlukanisi Esisodwa Se-Magnetic
I-Magnetic Separator ephathekayo
Isistimu Yokulinganisa Isikhwama 
Uhlelo lwe-DCS-B Bagging Scale
Uhlelo lwe-DCS-S Bagging Scale
Uhlelo lwe-Powder Bagging Scale
Umshini Wokufaka I-Granule othomathikhi
Umshini Wokufaka Amandla we-othomathikhi
Isikhuhli nomhambisi 
I-DTY Bucket Elevator
I-New Bucket Elevator
Z Uhlobo Lokukhulisa Bucket Elevator
Ukuhlanza Imbewu / okusanhlamvu 
Isitshalo Sokucubungula Imbewu Yeselula
Okusanhlamvu Nesitshalo Sokuhlanza Bean
Isitshalo Sisebenza Ngezitshalo
Izinto Zokusebenza Zelebhu 
I-Lab Seed Cleaner & Grader
Isihlukanisi seLab Gravity
Umshini we-Lab Destoner
Huller Nabanye 
I -ofi Pulper
Ilayisi Huller Nge Polisher
Isihlanzo Sembewu Ehlanzekile
I-SYNMEC, inkampani yezentengiselwano yamazwe omhlaba nayo ingumenzi onobuchwepheshe bokuhlanza okusanhlamvu nemishini yokusebenza kwembewu. Igama lemboni yethu yi-Hebei Ruixue Grain Selecting Machchan CO.Ltd, i-SYNMEC njengohlobo lomhlaba jikelele lwe- "Ruixue Grain Selecting Machchan LTD", futhi iyinhlangano yebhizinisi ezimele ye-'SYNMEC yokuhweba yamazwe aphesheya ' Ngakho-ke singanikeza ngemishini yobungcweti yokwenza kanye nensizakalo yokuhweba yamazwe aphesheya. Singomunye wabaholi nomakhi abasebenza kahle eChina abaneminyaka eyi-13. Kuze kube manje abakwa-SYNMEC basebenzise abathengi bamazwe angaphezu kwe-100, ngakho-ke siyayiqonda inqubomgomo yokuhweba yamazwe aphesheya ukuthi singanikeza ngemibhalo engcono yokuthumela imvume yamakhasimende, kuholele ekunciphiseni ubungozi ekutholeni kwamakhasimende impahla ekugcineni. Inkampani yethu ibhizinisi eliphelele lobuchwepheshe obuphezulu, olukhethekile ocwaningweni nasekukhiqizweni kwemishini yembewu, imishini yemikhiqizo yezolimo, imishini yemishini yokulima eyakhiwe ngemishini kanye nemishini yokuphaka esebenza. Inkampani yethu inamandla eqinile ngokwezimali, imishini ethuthukile kanye nesikhungo sokucwaninga esakhiwe kahle esisebenza kahle. Senza imizamo eminingi ukwethula ubuchwepheshe obuthuthukisiwe kanye nesipiliyoni sokuphatha kusuka ekhaya nakwamanye amazwe. Sizibophezele ngokuqhubekayo ekucwaningeni nasekuthuthukiseni imikhiqizo yezobuchwepheshe kakhulu futhi senze iqhaza ekwakhiweni kwemishini, umkhiqizo wezolimo, imishini yokudla nokudla kokuphakelayo. Sinezigaba eziningi nezinhlobo zemishini yezolimo. Ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe, ukusebenza okuhle, ikhwalithi ezinzile, ukwakheka okunengqondo nezinsizakalo zokucabangela, imikhiqizo yethu ihamba phambili emakethe yasekhaya. Manje sesikwazi ukunikela ngemishini yokucubungula yemikhakha engama-25 nezinhlobo ezingaphezu kweziyi-100, njengokubhula, ukukhetha, ukuhlanza, ukuhlanza, ukususa itshe, ukukhipha insimbi, ukuhlukanisa, ukuhlela, ukwahlukanisa ngokuqondile, ukuhlanganisa imbewu nemishini yokupakisha. Kusetshenziswe imikhiqizo eminingi yempahla yamalungelo obunikazi kazwelonke. Ukusekela umoya webhizinisi "wezinto ezintsha, inselelo futhi idlulele" kanye nabaphathi bekhwalithi yokuqala ", izinga eliphakeme nodumo oluphezulu", sesibe yibhizinisi eliholayo elihlanganisa "ucwaningo lwesayensi, imboni kanye nezohwebo". Inkampani yethu inemikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi isebenzisa izinsiza eziphelele ngemuva kokuthengisa, futhi sibandakanyeka ebhizinisini laphesheya kanye nokuthekelisa. Inkampani yethu isibe ngumkhiqizi oyinhloko wembewu, umkhiqizo wezolimo, imishini yokudla nokudla kokudla eChina. Sizimisele ukusebenzisana namakhasimende, futhi sizohlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme (ikhwalithi ephezulu, esebenza kahle kakhulu futhi enenhloso enhlobonhlobo), amanani aphansi nezinsizakalo eziphelele kumakhasimende ethu.
Imbewu Yamabele Imbewu Yesoya Cereal De Stoner
Umshini wePaddy Rice Seed Destoner I-seed destoner isetshenziselwa ukususa ukungcola okusindayo kwamanye amazwe njengamatshe, izingcezu zensimbi nengilazi njll ngomgomo wokwehluka kwesisindo. 5XQS imbewu destoner kuyinto remover ngamatshe . I-Destoner ingacubungula zonke izinhlobo zembewu nobhontshisi, futhi ibe...
Umshini wePaddy Rice Seed Destoner
Uhlobo lweDrum Pre Cleaner
okusanhlamvu imbewu kagesi enesisindo esingu-50 kg
Umshini wokuhlanza imishini yesinaphi
Isitshalo Sokuhlanzisisa Ummbila Woloya
Umshini Wokuhlanza Imbewu Welebhu
Grader yemvelo enobungane yemvelo iyathengiswa
Umshini Wokuhlanza Imbewu / Isihlanza Sembewu Esihle
Umshini wokuhlunga weCofi Cocoa Bean
Umshini Wokwenza Ummbila Wezinhlamvu Zokukhiqiza Ummbila weGobela
Umshini we-Cylinder we-Paddy okhonjelwe
uhlelo lokufaka okusanhlamvu okusinda
Umshini wokuhlanza imbewu we-Quinoa i-Australia ithandwa kakhulu
Ikheli:15th Guangan Street, Shijiazhuang, Hebei
Umshini Wokwelapha Imbewu
Indawo Yokuhlanza Imbewu
Isihlanza Imbewu Isihlukanisi seGravity Umshini Wonakalisi Isicoci esihle Umshini Wokwelapha Imbewu Indawo Yokuhlanza Imbewu
Copyright © 2021 SHIJIAZHUANG SYNMEC INTERNATIONAL TRADING LIMITED Wonke amalungelo agodliwe. Inikezwe amandla yi
Umkhiqizi / umhlinzeki we-Umshini wokuhlanza okusanhlamvu
, anikela nge-Isihlukanisi seGravity,Umshini Wonakalisi, njll.